Ngwongwo ọla, igwe anaghị agba nchara, UFO Ball - Ọwụwa
Changzhou Sunrise Steel Ball Co., Ltd. bụ onye na-emepụta bọọlụ nchara nke nwere ụlọ ọrụ nnwale dị mma yana ike ọrụ ike. Na a dịgasị iche iche, ezi mma, ezi uche ahịa na nkecha aghụghọ, anyị na ngwaahịa na-ọtụtụ-eji biarin na ndị ọzọ ọrụ. Anyị na ngwaahịa na-ebe ghọtara na tụkwasịrị obi site ọrụ na ike izute nọgidere na-agbanwe akụ na ụba na-elekọta mmadụ mkpa. Anyị na-anabata ndị ahịa ọhụụ na ndị ochie site na ụdị ndụ niile ka ha kpọtụrụ anyị maka mmekọrịta azụmahịa na ọdịnihu na ihe ịga nke ọma!
Ọwụwa ọwụwa ụlọ ọrụ bọl tọrọ ntọala na 1992.
Ngwa mpaghara: 304 igwe anaghị agba nchara ...
Ngwa mpaghara: 316 igwe anaghị agba nchara ...
Ngwa mpaghara: 440C igwe anaghị s ...
China Factory AISI420 3.175mm 4.7625mm akwa ...
Ngwa mpaghara: 420 igwe anaghị agba nchara ...
Mepụtara a pụrụ iche ọtụtụ ihe mejupụtara okpomọkụ ọgwụgwọ technology, si waya ịbịaru, oyi uzo, ezigbo bọl, okpomọkụ ọgwụgwọ, egweri, lapping, polishing, ihicha nnyocha, nkwakọ ngwaahịa, onye-nkwụsị mmepụta usoro, na usoro nke usoro si nhazi ọkara okokụre ngwaahịa iji rụchaa bọọlụ.
N'okpuru ọkọlọtọ ISO17025, enwere ike ịlele ma nyochaa ihe dị iche iche kemịkalụ, akụrụngwa akụrụngwa, na anụ ahụ dị n'ime.
A na-ejikwa kọmpụta emepụta bọọlụ nchara 4 niile. N'ihi nnukwu iweghachi aka na ntinye aka, usoro ngwaahịa anyị nwere nnukwu nkwụsi ike ọbụna n'etiti ogbe dị iche iche. Iji ngwaahịa anyị nwere ike ịbawanye mkpa gị Nkwupụta.
Ngwa ubi: 1010/1015 carbon st ...
Bọọlụ ọla kọpa na-eji ọla H62 eme ihe, nke ...
Bọọlụ Bramm 3mm, Ss304 Nchara Ball, Bọọlụ Ọla kọpa siri ike, Ball siri ike, Bọọlụ Brass, 3mm ọla kọpa,